Farmaajo wuxuu isku dhufsaday xisaab aan waxba ka jirin | KEYDMEDIA ENGLISH
Farmaajo wuxuu isku dhufsaday xisaab aan waxba ka jirin
Inkastoo olalaha doorashada musharixiinta uu yahay mid muuqda, lana ogyahay garbaha musharrax kasta ayay kooxda dacaayadda u qaabilsan Farmaajo, wali sii wadaan marin-habaabin si ay u qaldaan xildhibaannada ku cusub golayaasha.
MUQDISHO, Soomaaliya – Tan iyo markii Kooxda Farmaajo looga adkaaday doorashooyinkii hoggaanka Golayaasha Baarlamaanka, waxa ay billaabeen in ay si weyn suuqa u galiyaan in Farmaajo codod badan ka heli doono Aqalka sare, xisaabtuna aysan kaliya noqon doonin cododkii Aqal hoose ee uu helay Xasan Cabdinuur oo si xarago loogu garaacay wareeggi ugu danbeeyay ee baratabkii Guddoomiyaha Aqalka hoose.
Kooxda Farmaajo u qaabilsan barabagaandada ayaa ku doodeya in ku dhawaad cododka 20 xubnood oo Aqalka sare ah, ay heli doonaan, hayeeshee, waxa ay illowsan yihiin in Farmaajo yahay shaqsigii shanta sano, shaqo la’aanta ka dhigay Golaha Odayaasha. Shacabka ayaana is weydiinaya Sanatarka dooranaya hoggaan aan Aalka u oggolaan doonin inuu shaqadiisa dastuuriga ah u qabsado si ka madax bannaan fara-galin.
Sidoo kale, kooxda Farmaajo ku hareeereysan, waxa ay olalahooda ubuc ugu dhigeen in ay 98 cod oo Golaha Shacabka ah heystaan, iyaga oo ka duulaya cododkii uu Xasan Cabdinuur la yimid wareeggii 1-aad ee doorashadii Goddoomiyaha, yeelkeede, waxa ay iska indho tirayaan in 98 cod, ay wada shaqeeyeen Qoorqoor, Lafta-gareen, Fahad iyo Farmaajo, haddase uu guuxu muujinayo in aan la wada-shaqeyn doonin, gaar ahaan Qoorqoor.
Sida ay sheegayaan dadka falanqeeya siyaasadda, cododka labada Aqal ee Farmaajo, ilaa hadda gacanta ugu jira, waa tiro u dhaxeysa 60 ilaa 80 Xildhibaan, oo ay ku jiraan kutladda NISA, oo Fahad Yaasiin, gacanta ku hayo, taasoo u wareegsan karta Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre ama Maedaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed, oo ah labada musharrax oo Fahad uu Dooxa u aaday inuu ka soo dhaadhiciyo Madaxda Qatar.
Sagaal maalin ayaa ka dhiman, doorashada Madaxweynaha, sida muuqata dabayl is-baddel oo xooggan ayaa jirta, mana muuqato rajo uu Farmaajo, dib ugu soo laaban karo, ama ku sii joogi karo Villa Somalia, oo sanad iyo dheeraad uu sharci darro ku deggan yahay.
15-ka bishaan May, waxaa albaabka la tusi doonaa nidaamkii gafafka iyo gabood-fallada badnaa ee dalka ka talinayay shanti sano ee la soo dhaafay, waxaa laga gudbi doonaa, siyaasaddii ku dhisneyd kala adkaanshaha, kala aarsiga iyo ciil-qabka.